Ngamunye wethu angenza ngezinye izikhathi jikisa umlumbi, umculi, ubuhle okudala izinto ezejwayelekile kakhulu. Yiba namandla ukulidonsa esimweni samanje ke akudingekile. Into esemqoka - ukuzizwa umbala, ukuze bakwazi iphupho abafisa udale into enhle kakhulu.
Japanese kungokwalabo ukutholakala hhayi kuphela ezihlukahlukene ukuzisika-onqenqemeni ezobuchwepheshe, kodwa futhi emangalisayo e yobuhle balo nokuhlala ubuhlakani yobuciko lasendulo - ikebana. Ekuqaleni kwathiwa ukudala nje sezimbali izimbali obusanda kusikwa. Bakhandwa ibekwe endaweni yokuhlala, ngokuletha emaqaqasini ubuhle bemvelo namandla emvelo. Ngesisekelo ukwakheka kuyinto nenhle futhi ngesikhathi esifanayo izinto silula. Kamuva waqala ukwenza sezimbali imbali omisiwe, amahlumela, ngemicu yotshani, eshiya. Uqinisile kwakhiwa ekwindla ekibany.
amahlamvu Maple ehlakazekile egcekeni ...
Izame futhi wena njengenkosi yabo. Khetha isitsha esincane noma imbiza yobumba. Fit Ababazi bakha emvinini nome amagxolo, Ababazi bakha kwesitsha, bemewula ngeqoma. Uma ekibany ekwindla, kubalulekile ukubeka endaweni yokuqala, esitsheni ngenxa ngezinto zemvelo, futhi, okwesibili, ukuthobela lwemibala efudumele. Glass isitsha sezimbali kuleli cala, ngeke ukudala umphumela oyifunayo. Ngemva kwalokho, lungiselela nokuthile ababengambeka usebenza: Letha mgwaqo umoba omile of Turf ensimini futhi izitshalo sodwa okhalweni. Ngokuphawulekayo uyobheka ekwindla ekibany nge amahlumela ngesikele sokuthena of zasendle rose, lapho amajikijolo okokhelwe. Futhi-ke, ezihlukahlukene maple eshiya! Ukusebenzisa isimiso Ngokuphambene, bheka sinombala, maroon kanye ophuzi. imibala zabo zikanokusho, ukuthungwa ezimibalabala ukunikeza shades emangalisayo autumn kwemizwelo. Phelelisa ukubunjwa ezomile fir Izigaxa. ekibany ekwindla yakho Sekukancane! Beka lihlale enhle vase noma kubhasikidi wenza izinto. Eduze kwetafula, beka apula elibomvu ezimbalwa futhi Izigaxa. Futhi ukujabulela izipho ekwindla!
Bamphathele nezimbali omisiwe
Uma indlela yokwakheka odlule ngokuyinhloko amahlamvu, manje uzokwenza kweqembu. Imbali ekwindla ekibany, izithombe oyisebenzisayo ngakwesokunxele, yakhiwa kanje. Uzodinga izimbali omisiwe. Kungaba asters, amabhola segolide, umlunge ezincane, ngisho rose. Ngokuphawulekayo, uma kukhona marigolds, wallflowers, Marigolds. Bona eziqhakaza kuze ukuwa sekwephuzile, ngoba ungahlala ukuthola amakhophi ambalwa. A iyisibusiso real ukuwa amalungiselelo akho imbali ngeke physalis. ngomusa wakhe sifanamsindvo nezithelo encane ebomvu ngokwazo ezikhangayo. Futhi phakathi izimbali omisiwe Babukeka samaholide ikakhulukazi futhi ukugcizelela ohlukile izitshalo eseduze. Esikhundleni Physalis kungathatha asparagus. Amahlumela ngesikele sokuthena of Rowan, obomvu, ophuzi, owolintshi kanye njalo namahlamvu, futhi, eyokusiza inkonzo enkulu. Omunye wemithetho eziyisisekelo indlela yokwenza ekibanu - hhayi ukumisa isixha aluhlaza kakhulu. Vele uthathe into eyodwa njengoba main kanye nesikhonzi 2-3. Njengoba Japanese ngokwabo abathi ikebana izakhi 3: esibhakabhakeni, abantu, ezweni. Futhi ngamunye yezingxenye limelela omunye wabo. Zonke izinto sokuqanjwa ukufakwa izindiza ehlukene, asymmetrically, simulating khulula, umoya okudala nemvelo.
Projects townhouses imikhaya 2: inzuzo indawo kanye amakamelo
A izindlela ezimbalwa ukwenza isicupho izinyoni. Indlela yokwenza isicupho izinyoni kusuka ebhokisini noma ebhodleleni?
Uthi Slavic. Ukwakheka uthi Slavic. Amafulegi uthi Slavic